Mobile Odin Pro, biligleynaya waligeed sidan uma fududaan | Androidsis
Mobile Odin Pro, biligleynaya waligeed sidan uma fududaan
In badan oo naga mid ah oo akhrista balooggan ayaa og waxa ay tahay ODIN. Kuwa aan ogayn, ODIN waa aalad aan ku rakibi karno nidaam kasta oo ku shaqeeya Android. Ama sida ugu badan looga yaqaan bulshada Android, wuxuu noo ogolaanayaa inaan iftiimino qalabkeena Android.
Tan macnaheedu waa barnaamijkan waxaad ku rakibi kartaa nooc cusub oo Android ah (sida nooc duug ah) ilaa rakibida wixii ROM ah oo la kariyey, taas oo ah, Android kasta oo ay sameyso bulshada.
Hagaag hada Dab -damis waxay soo saartay Mobile Odin Pro. Qalabkani ma aha oo kaliya inuu kuu oggolaado inaad rakibto wax ROM ah ama aad cusbooneysiiso nidaamkaaga hawlgalka Android, laakiin sidoo kale Waxay noo ogolaaneysaa inaan ka sameyno isku xirka arjiga laftiisa iyo iyada oo aan loo baahnayn inaan kala soo baxno ROM-ka.
Sida aad qiyaasi karto, qalabkani wuxuu ka dhigayaa hawsha iftiiminta qalabkeenna mid aad u fudud. Tan iyo markii aan ka takhalusi lahayn raadinta khadka tooska ah ee nooca 'Android' ee aan dooneyno inaan ku rakibno aaladdayada.
Waxay sidoo kale kudarsantaa nidaam, kaas oo runtii dad badan ka madax baneyn doona madax xanuun, waxay ku saabsan tahay EverRoot, taas oo naga dhigaysa mudnaanta Root, xitaa haddii aan rakibno nooc rasmi ah.
Waqtigan xaadirka ah codsigu wuxuu kaliya la jaan qaadayaa tiro yar oo qalab ah:
In kasta oo ay xaqiiq tahay inay qasab tahay xidid iyo in tirada aaladaha la jaan qaada ay aad u yar yihiin (Chainfire wuxuu balan qaadayaa inuu kordhin doono liiska qalabka la taageerayo), Qalabkani waa mid aad u faa'iido badan isla markaana ka dhigaya hawsha iftiiminta qalabkeenna Android mid aad u fudud.
Waxaad haysataa arjiga laga heli karo Suuqa qiime ahaan 1.99 €.
[xididka] Mobile ODIN Pro
Developer: Dab -damis
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Mobile Odin Pro, biligleynaya waligeed sidan uma fududaan
Waan soo dejiyey, rakibay. Markii aad furto barnaamijka waxaad ka soo degsatay faylka suuqa. Laakiin menu-ka Darawalka CF3D iyo ikhtiyaarrada flas ee hoose ayaan ila qabsan, way madow yihiin iyagoon awoodin inay doortaan.
Mobile-kayga S Galaxy S
Ku jawaab Iniphyros
Haddii aan xidid ahay, waxaan ku shiday shalay superoneclick 2.2. Waxaan hayaa kaydka titanium iyo superuser-ka.
Miyuu noqon doonaa barnaamijka ODIN in la ogaado haddii ay tahay inaan dhigo wax faylal ah oo odin pc ah uu u adeegsado inuu ka shaqeeyo?
Buuuu… waa lagaa xaday
Ku jawaab MartinPalermo
Waayo ?? Mobiilku wax dhibaato ah ima siinayo, wuu sii socdaa shaqadiisa.
Si aan fikrad kaaga siiyo waxa igu dhacaya.
Waxaan furaa Odin, waxay umuuqataa in waxwalba ay sifiican udulqaadaan khaladaad la'aan iyo waxna, laakiin:
Qeybta «partitions» safka koowaad (PIT, IBL /….) Wuxuu ku soo muuqanayaa cawl wuxuuna dhahay «Mobile ODIN ma kuleylka kuwan!»
Kadibna Kernel, Nidaamka, DBData…. waxay dhigaysaa "Midna" dhammaantoodna haddii aan doorto midkoodna waxay i weydiineysaa inaan furo Card SD-ka Gudaha ama SD Card Dibadda ah.
Hoos kadhagayso qaybta Ever Root, dhamaan cawlku wuu muuqdaa, isagoon ikhtiyaar u lahayn inaad wax doorato.
Iyada oo qaybta Flash-ka ay isku mid yihiin, oo ay ku qoran tahay "ma jiro qaybo loo xushay in lagu ifiyo".
Taasi waa sababta aan kuugu sheegayay in laga yaabo in sababta oo ah markii ugu horeysay ee aanan ku iftiimin Odin, sida ay tahay inaad faylasha qaar ugu dhejiso SD, hadda barnaamijkan ma heli karo
Waan ku celinayaa, waxaan ku shubay SuperOneClick 2.2 qaab otomaatig ah waxaanan haystaa Superuser, Titanium Backup iyo AdFree.
Runtii wax fikrad ah kama lihid ??
Waan soo degsaday barnaamijka oo qalad buu i siinayaa waxaan haystaa nooca bilaashka ah ee 2.3.4 Waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo ilaa 3.5
Ku jawaab Hernanpuig4
Waad salaaman tahay, waxaan soo dejiyey mobilka Odin, laakiin qof ma ii sheegi karaa halka aan kala soo bixi karo nooca ugu dambeeya ee android si aan isugu dayo inaan u rakibo?
Jawaab Pablo Aznar Liz
Naadiga ilkaha dijo
Salaan kadib, gal boggan raadinta waxa odin macnaheedu yahay, subaxnimadan taleefanku wuxuu ahaa Samsung S2, fariin ayaa u muuqatay inay leedahay cilad, mid culus oo OS ah, androit oo ay tahay inuu riixo furaha mugga kor, si loo xaliyo dhibaatada, Waan sameeyay oo taleefanku wuxuu ku hadhay bog leh odin mode, soo degsasho oo aan ka dansan bartilmaameedka, ma aqaano waxa ku saabsan, waan ku qanacsanahay gargaarkaaga,
Samsung Galaxy Tab 10.1 Dib u eegis (Qaybta Koowaad)